I-Redmi Qaphela i-7 uthotho luwele ukuthengisa kwezigidi ezi-5 kwenye yeemarike ezinkulu | I-Androidsis
I-Redmi Qaphela i-7 uthotho luwele ukuthengisa kwezigidi ezi-5 kwenye yeemarike ezinkulu
Para muchos, el Redmi Qaphela 7 nangoku ngukumkani ophakathi, ngokwezibonelelo ezibonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali. Kwabanye, esi sihloko sithathe ixesha elifutshane, kwaye enkosi kwinto yokuba iSamsung yenze kwaba nzima kakhulu kwesi siginali, ngeefowuni ezininzi zoluhlu lweGalaxy A. Nangona kunjalo, ezi azikhange zikwazi ukufumana udumo olufanayo neselfowuni I-sub-brand kaXiaomi iphumelele okoko yaba semthethweni ngoJanuwari.
El I-Redmi Qaphela i-7 Pro sesinye isiphelo sendlela esiyinxalenye yolu ngcelele. Umahluko onamandla kancinane owokuqala, kodwa awufumaneki ngaphandle kwe China ne India. Ezi zimbini zihamba kunye, kunye Inqaku leRedmi 7S, ndikwazile ukugqitha kwinani le Iiyunithi ezizigidi ezingama-5 zithengisiwe kule marike yokugqibela ekhankanyiweyo, ngokwopapasho olwenziwe yiRedmi Indiya ngeakhawunti yalo esemthethweni ye-Twitter.
Ngokwengcaciso ebonelelwe yinkampani ngenethiwekhi yoluntu, eyayithumela ngevidiyo, uthotho lweRedmi Note 7 luye lwasebenza kwilizwe elikhulu laseAsia, kangangokuba, Kwiinyanga nje ezi-5, ikwazile ukubhalisa ukuthengisa ngaphezulu kwe-5 yezigidi zeeyunithi. Oku kusixelela okuninzi malunga nokwamkelwa okuhle abathengi abakule marike babanikeyo kunye nodumo olukhulu olonwabisayo kwesi sibini.
Cinga ukuba sikugcinele ntoni?
The # RedmiNote7Pro kwintengiso evulekileyo eqala namhlanje! Ngoku yifumane nanini na xa ufuna. Iyafumaneka nge https://t.co/cwYEXdVQIo, @flipkart, Ikhaya lam, iStudiyo sam, kunye neevenkile endizithandayo.
Kwenzeka njani ukuba #LwesineInkuthazo? # 48MPCameraBeast pic.twitter.com/pgTgt2F26G
-I-Redmi India ye #MiFans (@RedmiIndia) Agasti 1, 2019
Impumelelo yolu luhlu lweefowuni kungenxa yeempawu ezibalaseleyo kunye neenkcukacha zobuchwephesha abazibonelelayo. Inqaku leRedmi 7, eliyimodeli esembindini, yeyona ithandwayo, kunjalo. Oku, masikhumbule, sixhobisa isikrini se-IPS LCD ye-6.3-intshi nge-FullHD + isisombululo se-2,340 x 1,080 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio ratio, kunye neprosesa ye-Snapdragon 660, 3/4/6 GB ye-RAM, 32 / I-64/128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi kunye ne-4,000 mAh ibhetri yamandla ngenkxaso ye-18-watt yokutshaja ngokukhawuleza.
Ikhamera ezimbini zale fowuni zenziwe nge-sensor ephambili ye-MP eyi-48 kunye ne-5 MP yesibini sensor, ngelixa umphambili wokudubula enesisombululo se-13 MP.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi Qaphela i-7 uthotho luwele ukuthengisa kwezigidi ezi-5 kwenye yeemarike ezinkulu
I-LG K20 kunye ne-LG K30: Isiphelo esitsha sophawu
Ukulungiswa kweengxaki zekhamera zeXiaomi Mi A3